Wakiil Wasaaradda Ciyaaruhu u igmatay UK oo lagu soo dhaweeyay London | Somaliland.Org
Wakiil Wasaaradda Ciyaaruhu u igmatay UK oo lagu soo dhaweeyay London
December 23, 2012	London (Somaliland)- Munaasibad lagu soo dhaweynayay wakiil cusub oo uu Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Cali Siciid Raygal dhawaan u magacaabay inuu u matalo dhalinyarada iyo bahda Ciyaaraha dalka Ingiriiska ayaa lagu qabtay magaalada London.
Waxa xafladaas ka qaybgalay dad badan iyo masuuliyiin badan oo ay ka mid ahaayeen Safiirka Somaliland ee UK Cali Aadan Cawaale, Mohamed Najiib oo ah aqoonyahan dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda ah, Miss Tina Marshall oo ka socotay ururka dhalinyarada iyo ciyaaraha degmada Bromley ee Magaalada London, Miss Dani Gordon oo u qaabilsan iskaashiga dhalinyarada ee degmada Bromley magaalada London.
Wakiillka Cusub Jaamac Axmed Olol oo goobtaas hadal ka jeediyey ayaa mahadnaq u jeediyay Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha.
sidoo kale waxa uu sheegay in xilka loo igmaday uu wax wayn ka tari doono waxqabadka dhinaca dhalinyarada iyo ciyaaraha, waxaana ka mid ahaa hadaladiisii. “Marka hore waxaan u mahadcelinayaa Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Cali Siciid Raygal oo dhawaan xilkan ii soo magacaabay, itusayna qalbi furan fikrad cusub iyo dhiirigalin. waxa kale oo uu wasiirku ku amaanan yahay inuu dhalinyarada u furay albaab cusub oo hore u xidhnaa maadaama oo xilkani yahay kii ugu horeeyey ee noociisa ah.”
Jaamac Olol oo halkaa ka jeediyay khudbad dheer oo taabanaysa dhinacyo badan sida baahida dhalinyarada, kobcinta ciyaaraha kala duwan iyo walibana dalxiiska Somaliland ayaa waxa hadalkiisii ka mid ahaa; in dhalinyarta Somaliland ay u baahantay shaqo abuur maadaama oo camal la’aanta dhalinyarta Somaliland ay maanta marayso 82%. waxa kale oo uu sheegay in ciyaaruhu yihiin muhiim oo ay dhalinyarta ka badbaadiyaan dhibaatooyin badan rajana galiyaan.
Mar uu ka hadlay dhinaca dalxiiska wuxuu sheegay in Somaliland ay leedahay meelo badan oo taariikhi ah oo daxiisayaashana soo jiidan kara. tusaalayaasha oo wakiilku soo qaatay waxa ka mid ahaa gobolka Sanaag oo uu sheegay inay jirto goob shinbiraha aduunku ku nastaan marka ay tahriibayaan, taasoo soo jiidan karta dad badan oo aduunka ka mid ah oo jecel inay shinbiraha daawadaan afka qalaadna loo yaqaan (Bird watchers).
Safiirka Somaliland ee Ingiriiska Cali Aadan Cawaale oo isna halkaa ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in lala shaqeeyo lana taageero Jaamac Axmed Olol, sagoo hadalkiisa sii watana waxa uu sheegay in shaqada iyo xilka Jaamac ay qayb ka tahay Somaliland UK Mission.
Rashiid Cabdi Quradhmaarke oo ka socday ururka Sport and Development Network ayaa sheegay in Somaliland aanay wax kaalmo ah ka helin ururka IOC iyo FIFA, taasina qaybta ciyaaraha ee Somaliland ay ka dhigtay mid aan xaaladeedu fiicnayn. Waxa kale oo uu halkaa ugu baaqay dadka reer Somaliland in ay gacan wayn ka gaystaan qaybaha kala duwan ee ciyaaraha. waxaanu u hambalyeeyay Jaamac Olol, isla markaana waxa uu u mahadceliyey Wasiir Cali Siciid Raygal.
Previous PostShir Lagu dejinayo Qorsheyaasha sanadka 2003-ka ee Wasaaradda Caafimaadka Oo ka furmay HargeysaNext Post“80 Cod Ayuu Madaxweynuhu Kursiga Kaga Tagay, waa Loo Duceeyay Madaxweyne ayaanu ku Noqday”	Blog